I-Lake House e-Catalina - I-Airbnb
I-Lake House e-Catalina
Mooresville, North Carolina, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Ashley
U-Ashley Ungumbungazi ovelele
Jabulela leli khaya elithokomele elingasemanzini eLake Norman elihle.
Buka ukushona kwelanga okumangalisayo kusukela kwelinye lamadokodo ethu amabili [enhle ngokudoba futhi!] Hlola indawo nge-kayaking futhi ujabulele amanzi eLake Norman kusukela ogwini lwethu oluyimfihlo. Hlala ufudumele ngenkathi ujabulela lobo busuku obupholile ngemigodi yomlilo kule ndawo enokuthula yechibi.
Imizuzu kuphela ukusuka ezitolo zegrosa nezitolo, amapaki, izindawo zokudlela kanye nemigoqo. Itholakala kalula eduze komgwaqo onguthelawayeka 77 ngohambo olufushane oluya kunoma yimuphi umsebenzi wedolobha laseCharlotte.
Leli khaya lilungele noma yikuphi ukubaleka.
Jabulela inkomishi yakho yekhofi yasekuseni kuvulandi obonisiwe, idla isidlo sasemini esitokisini esingaphambili ngaphansi kwesambulela esikhulu futhi udle isidlo sakusihlwa ngenkathi ubuka ukushona kwelanga esikhumulweni semikhumbi esikude esihlanganisa iqhugwane le-Tiki elihle elinefriji elincane!
Indawo yolwandle yangasese izoqiniseka ukuthi igcina lezo zingane zijabule futhi ukubukwa okuhle kuzokugcina ufuna ukubuya isikhathi nesikhathi futhi!
Kunama-kayak ama-3 atholakalayo ukuze asetshenziswe namajakhethi okuphila anikeziwe.
Imigodi yomlilo iyatholakala ukuthi isetshenziswe futhi, enye ikuvulandi wekamelo lokulala elikhulu, enye ikwidokhi elingaphambili enye ngaphandle endaweni ekude.
Ihitha enkulu yangaphandle kuvulandi ohloliwe izokuvumela ukuthi ujabulele ukudla kwakusihlwa kwangaphandle nangalezo zikhathi zakusihlwa ezipholile.
I-inthanethi Esheshayo iyatholakala ekuzijabuliseni kwakho kokusakaza-bukhoma, nama-TV amabili ekhaya neyodwa ngaphandle esitokisini esikude ukuze ubukele amaqembu akho owathandayo kuyilapho ujabulela ukubukwa kwechibi.
I-Pack N Play iyatholakala kulabo abahamba nezingane ezincane.
4.94 · 116 okushiwo abanye
Itholakala eLake Norman ngaphesheya kwe-Stutt's Marina ejwayelekile futhi emaphakathi eMooresville lapho uphuma khona 33, maningi amathuba okuthenga + neminye imisebenzi yangaphandle ejabulisayo.
Kusukela e-U.S. National White Water Center ngaphansi kwamamayela angu-30 eningizimu yaleli khaya, noma ipaki yeSifundazwe SaseLake Norman etholakala ngaphansi kwamamayela angu-20 enyakatho, kumnandi ukuba nabo bonke!
Kulabo balandeli bebhola, iPanther's Bank of America Stadium ingamamayela asheshayo angama-25 aqonde phansi ku-hwy 77!
Sitholakala nge-imeyili nangefoni ngesikhathi sokuhlala kwakho futhi sitholakala kalula nje kumamayela ambalwa ukuze sifinyelele ngokushesha.
UAshley Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Mooresville namaphethelo